Reed Exhibitions mizara fahaiza-manao manerantany amin'ny tsenan'ny Arabian Travel
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Reed Exhibitions mizara fahaiza-manao manerantany amin'ny tsenan'ny Arabian Travel
Ny tsena fitsangatsanganana arabo (ATM) dia hatao any Dubai ny 16-19 Mey 2021. Aorian'ilay hetsika ara-batana dia hisy singa nomerika hikarakarana ireo izay tsy afaka mandeha, miaraka amin'ny ATM Virtual (24-26 Mey).
Ny fampiharana sy ny traikefa tsara indrindra amin'ny fihazakazahana hetsika COVID-azo antoka dia omen'ny Reed Exhibitions ho an'ny ATM.
Ny hetsika Reed Exhibitions dia natao soa aman-tsara nanerana an'izao tontolo izao hatrany Shina sy Japon ka hatrany Russia sy Thailand.
Miaraka amin'ny fahaizana manokana amin'ny fampifangaroana mivantana amin'ny hetsika virtoaly, ny Reed Exhibitions dia manome ny traikefa tsara indrindra ho an'ny mpijery.
Reed Exhibitions dia mbola miara-miasa akaiky amin'ny governemanta eo an-toerana sy ny firenena ary ny fikambanan'ny fahasalamam-bahoaka ao anatin'ny tetikadiny Global COVID-19 'Safe Shows' momba ny fahasalamana sy ny fiarovana, natomboka tamin'ny Janoary 2021.
Rehefa manomboka mihamora ny famerana manerana ny firenena, Fampirantiana bararata'hetsika erak'izao tontolo izao dia mizara ny fanao tsara indrindra sy ny zavatra niainany tamin'ny fihazakazahana zava-nitranga mivantana sy azo antoka COVID, anisan'izany ny Tsena fitsangatsanganana arabo (ATM).
Mifantoka amin'ny: fiaraha-miasa, fitantanana risika, drafitra, fifandraisan-davitra ary fepetra fiarovana, ny drafitra dia mifanaraka amin'ny areti-mandringana, ny fomba fanao tsara indrindra, ny fikarohana vaovao ary ny valin'ny fahasalamana manerantany (vahoaka), satria ny indostria dia miova tsikelikely sy manokatra indray ny orinasa.
Azia Pasifika no faritra voalohany nipoitra avy amin'ny fameperana nasionaly sy tany Sina, Reed Huabo Exhibition Co Ltd. nitazona ny fanomezam-pahasoavana lehibe sy ny fampitaovana an-trano tao Shenzhen World Exhibition & Convention Center tamin'ny Jona 2020.
Reed Exhibitions Japon dia afaka nanao hetsika hybrid hatramin'ny fararano 2020, mikarakara ireo matihanina amin'ny sehatra toa ny lamaody, fanomezana, elektronika, fanamboarana, fiara, famokarana, fanafody, IT, marketing ary fambolena.
Tamin'ny Septambra 2020, Herinandron'ny fomba fiaina any Tokyo dia noraisina an-tanan-droa 16,817 mpitsidika eo an-toerana mihaona Mpandrindra 283 avy manerana an'i Japon mandritra ny roa andro. Ny hetsika dia nanolotra fonosana 'tsy misy mpanentana' ihany koa mba hirosoana mihoatra ny fetra.
Any Thailandy, Reed Tradex's, hetsika milina Metalex any Bangkok dia natao tamin'ny Novambra 2020.
Firenena 12 no manakaiky ny masoivoho any Korea Avaratra noho ny tsy fahampian'ny entana sy fanafody ilaina